Modric Oo Ka Hadlay Kulanka Xulkiisa Uu Wajahayo England, Iyo Waxa Ay Uga...
Luka Modric ayaa sheegay in kula ciyaarista England ee Wembley dhamaadka usbuuca furitaanka ee Euro 2020 ay la mid tahay in la ciyaaro fiinaalaha ciyaarta ugu horeysa ee tartanka.
Kabtanka xulka Croatia, oo 35 jir ah, ayaa xulkiisa geeyay finalka Koobka Aduunka 2018 isagoo garaacay England semi-finalka laakiin ma uusan dooneynin inuu wajaho kooxda Gareth Southgate xilli hore.
England wixii intaa ka dambeeyay wax yar ayey ka aarsatay guuldaradii Koobka Adduunka, markii ay 2-1 kaga badisay Croatia ciyaar ka dhacday Wembley oo ka tirsan Nations League, laakiin Modric wuu ogyahay in Axadda soo socota uu muhiim yahay Kulankaasi.
Real Madrid iyo laacibkii hore ee qadka dhexe ee Tottenham, oo ku guuleystey 137 kulan una dhaliyey 17 gool xulka Croatia, ayaa yiri: ‘Groupkeena Euros waa mid aad u adag. England, Czech Republic iyo Scotland waa kooxo fiican mana sahlanaan doono in la aado wareega labaad.
‘Had iyo jeer rajo ayaan qabaa, waxaana ku qamaaraa Croatia si aan uga gudbo laakiin waa wareeg aad u adag oo adag. Inaan ciyaareyno ciyaartii furitaanka ee aan la ciyaarnay England, iyo Wembley, ayaa dhahihi karaa Waa final dhab ah oo kale.
Related Topics:EnglandhadlayiyoKulankaModricsomaliweyn wararka maantaugawajahayoWararka Ciyaarahawararka ciyaaraha suuqa kala iibsigaWararka Maantawararka maanta - bbcwararka maanta 2020 somaliwaxaXulkiisa
Wararka Maanta : Cilmi Baadhista Siyaasada Soomaaliya ee Garoowe Lagu Soo Bandhigay & Xogo |...